Shiinaha BPA Weelka Biyaha Burburi kara ee Bilaashka ah (oo leh Spigot) warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Kaiguan
Weelka Biyaha Bilaashka ah ee BPA (oo wata Spigot)
Cunto-fasal udgoon Dhadhanka weyn:
l Balaastig LDPE ah oo lagu sameeyay alaab ceyriin ah oo tayo sare leh Japan
l Deegaanka u saaxiibtinimo aan sun ahayn
l Malaha BPA PVC ama DEHP
l Ma jiro ur caag ah PVC
l Dhadhanka biyaha saameyn kuma yeelan doono
Kala-xulashooyinka Awoodda Kala Duwan: 5L 10L 20L.
Bannaanka, Degdegga ah iyo Isticmaalka Maalinlaha ah:
Weel biyo ah oo la kala qaadi karo, oo ku habboon waxqabadyada bannaanka, sida boorsada dhabarka, kaamamaynta, socodka, fuulitaanka, ugaadhsiga, ayaa kaa caawin kara inaad kaydiso dhammaan biyaha qoyskaagu u baahan yahay si dhakhso leh oo nabdoon inta lagu jiro xaalad degdeg ah ama musiibo dabiici ah sida duufaan, duufaan, dhulgariir , dab, daad ama abaar. Sidoo kale waa ku fiican tahay isticmaalka maalinlaha ah, sida gawaarida degdegga ah ee baabuurta & Saldhigyada gacmo-dhaqashada ee munaasabadaha iyo ciidaha. Ku qaado gaadiid biyo aad u tiro badan si fudud.
Leakproof Spigot: Naqshadeynta qasabada gaarka ah, nashqadeynta / off off spigot, Ka-hortagidda daadinta biyaha qaadista, wax buuq ah oo ku saabsan biyo daadinta meel kasta, waxaad si dhakhso leh u xakameyn kartaa socodka biyaha, si sahlan loo isticmaali karo.
l Naqshad, La qaadan karo, Iftiin, Iswaafajin kara & Dib loo isticmaali karo Naqshadeynta Naqshadeynta.
l Wuu jilicsan yahay oo jilicsan yahay xitaa marka qabow weli hayo qaab.
l Si fudud loo buuxiyo, loo qalajiyo, loo daadiyo oo dib loogu isticmaalo.
l Gacmo jilicsan oo jilicsan ayaa ka dhigaya haynta iyo gaadiidka mid fudud.
l Laallaabi karo si loo badbaadiyo oo miisaanka culus loo dhigo shandadaada ama gaarigaaga.
Boorsooyinka biyaha lagu keydiyo ayaa muhiim u ah nolol maalmeedka iyo xaaladaha degdegga ah. Haddii kaabayaasha biyaha ee magaaladaadu si lama filaan ah u joojiyaan shaqadooda, sideed u cabaysaa ama u nadiifinaysaa?
Haddii ay jiraan duufaan, duufaan, daad, dab, abaar, dhulgariir, maxaad u isticmaali doontaa inaad ku keydiso biyaha si aad u daboosho baahiyahaaga biyaha?
Weelkayaga keydinta biyaha ee isku laaban ayaa ku siin doona diyaarinta xaaladaha degdegga ah ee ugu muhiimsan ee qalabka badbaadinta naftaada!
Weelkeena gacanta ku haya waa qalab tayo sare leh LDPE, BPA-la'aan, polyetylen-ka cuntada ku jira iyo weel caag ah oo aan sun lahayn.
Boorsada biyaha la laalaabi karo ayaa ah laab laaban karo, iftiin, la qaadi karo, waari karta, bacda lagu keydin karo biyaha dib loo isticmaali karo, oo ku habboon meel kasta, oo si sahlan loo rakibo loona isticmaalo.
Hore: 20 litir bacda shaandhada ku jirta sanduuqa
Xiga: Cuntada LDPE cubitainer